Archive du 20190813
Rivo Rakotovao “Aza atao bontolo ny fandaniana lalàna …”
Nomen’ny filohan’ny antenimierandoholona Rivo Rakotovao ny hafatra mavesatra ny governemanta sy ny fitondram-panjakana tamin’ny ankapobeny omaly nandritra ny lanonam-panokafana ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa an’ity andrim-panjakana ity.
Fanotofana ny lemak’Ambohitrimanjaka Aza potehina ny fiainam-bahoaka, hoy ny Depiote Rodin
Efa tamin’ny andron’ny Itompokolahy Pr Zafy Albert no niketrehan-dRaboanarijaona Holijaona an’io IEM io, hoy ny fanehoan-kevitry ny depiote voafidy tany Arivonimimamo Rakotomanjato Rodin.
Fanovana ny lalàna momba ny fanoherana Tsy misy idiran’ny governemanta, hoy ny praiminisitra
Hanolotra ny programa ankapoben’ny fanjakana na ny PGE eny amin’ny antenimieram-pirenena ny praiminisitra lehiben’ny governemanta,
Politika ankapoben’ny fitondrana «Aoka tsy hosafosafoina fotsiny !»
Mafonja ny lahadinika mikasika ny fitsipika anatin’ny antenimieram-pirenena mandritra ity fivoriana ety Tsimbazaza nosokafana androany ity (TTF : Omaly), hoy ny depioten’Ambositra, Monique Rasoazananera.
Roland Ravatomanga “Fiarovana ny demokrasia ny antom-piasan`ny mpanohitra”
“Zava-dehibe ny nahitana an`ireo mpiantsehatra satria mitovy hevitra ary miara-mihetsika ny antoko mpanohitra sy fikambanana rehetra vonona hijoro amin`izany”, hoy i Roland Ravatomanga, mpanao politika sady minisitra teo aloha.
Profesora Joseph Ramiandrisoa “Tsy sahy miatrika fifidianana ny fitondrana”
“Tsy sahy miatrika fifidianana ny fitondram-panjakana”, hoy ny minisitra teo aloha, ny dokotera Joseph Ramiandrisoa.
Tetika hanilihana an-dRavalo Tezitra sy mampiaka-peo ny TIM
Mifanohitra tanteraka amin’ilay lalàna tena misy ilay volavolan-dalàna nataon’ny depiote Brunelle Razafitsiandraofa momba ny sata mifehy ny mpanohitra, hoy ny fanambaran’ireo depiote avy amin’ny Antoko TIM omaly teny Tsimbazaza.
Jirofo Malagasy Mbola mila ezaka ny fanatsarana ny kalitao
Misokatra nanomboka omaly alatsinainy 12 aogositra 2019 ary mifarana ny zoma 20 septambra ho avy izao ny fandraisana ireo antontan-taratasy fangatahana fankatoavana ho an’ny taom-piotazana 2019-2020 ny amin’ny fanondranana jirofo.
Fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra Miainga amin’ny fanohanana ny tantsaha
Vondron’ny tantsaha rejionaly miisa 10 no nahazo famatsiam-bola 8 hetsy dolara na 2 933 552 000 Ariary (1dolara=3666,94 Ar) avy amin’ny fandaharanasam-panjakana DEFIS. Faritra 3 dia ny faritra Amoron’i Mania,
Fahombiazan’ny firenena Mila tanora mianatra
Nankalazaina omaly alatsinainy 12 aogositra ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny Tanora. Hadino tanteraka ny tanora hatramizay, hoy ny minisitry ny tanora sy fanatanjahantena Tinoka Roberto kanefa manome 60% amin’ny vahoaka Malagasy.
Fanadinana CEPE Ny taranja kajy no mbola tena atahoran’ny mpiadina
Hotanterahina ny 27 aogositra ho avy izao ny fanadinana CEPE manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara.
Anosy Nivadika vato ny telefaonina novidiana
Voan’ny maso be tsy mahita ve sa tratry ny hafainganan-tanana ? Loza no nahazo ity tovolahy iray fa nijerijery ary tapa-kevitra fa hividy telefaonina na finday ny alahady hariva teo.
Ady amin’ny aretina lefakozatra Zaza 2.542.712 no kendrena ho vita vaksiny
Notanterahina nanomboka omaly alatsinainy 12 aogositra manerana ireo distrika 55 ao anatin’ny faritra folo eto Madagasikara ilay hetsika fanaovam-baksiny iadiana amin’ny aretina lefakozatra andiany faha-15.
Kaominina Ampitatafika Hampiasa ny teknolojia avo lenta amin’ny fitakian-ketra
Tsy mbola niova mihitsy ny fitakian-ketra teto amintsika tato anatin’ny 40 taona izao, hoy ny orinasa “Digital Afrique telecom” manana ny foiben-toerany any Côte d’Ivoire.
Loza teny amin’ny fasan’ny karana Nitolo-batana ilay mpamily nahafaty mpiambina sarety
Lehilahy iray sahabo 27 taona no notanan’ny polisy misahana manokana ny lozam-pifamoivoizana na (BAC) ny zoma lasa teo rehefa avy nandona sarety maromaro teny amin’ny fasan’ny karana ka nahafaty olona iray.
Kidnapping teny Ampefiloha Olona 2 no voasambotra hatreto
Mbola ao anatin’ny fanadihadiana lalina ny mpitandro filaminana, roa tamin’ireo mpaka an-keriny no efa tra-tehaka.
Distrikan’i Betroka Dahalo 3 maty notifirin’ny fokonolona
Dahalo telo maty voatifitry ny fokonolona tao Amberomena, fokontany Irotsoka, Kaominina Ambalasoa, Betroka, ny zoma 9 aogositra tamin’ny 3 ora tolakandro.
Halatra fiara teny Ambohimangakely Olona 6 nidoboka eny Tsiafahy sy Antanimora
Natolotra ny fitsarana teny Anosy omaly ireo 7 mianadahy voasaringotra tamin’ilay halatra fiara teny Ikianja noravana teny Ambohidratrimo.
Omby miakatra eto Antananarivo “Tokony haraha-maso akaiky”
Any amin’ny fokontany, kaominina, indrindra, iny faritry ny Bara sy Toliara iny dia fantatra fa betsaka ny zavatra azo atao ifampifehezana,
Fikarohana jiolahy ikoizana Mampiasa kara-panondro hosoka maro i Del Kely
«Nanova anarana i Del kely izay jiolahy ikoizana ary manao kara-panondro hafa nony efa efa niha nalaza tamin’ny asa ratsy », hoy zandarin’i Betsiboka, nitafa manokana tamin’ny mpanao gazety.
Kivy tanteraka ny mponin’Ambohimahasoa Dahalo mamono olona, mpitandro filaminana mamono olona…
Tofoka sy leo ny tsy fandriampahalemana ny vahoaka any amin`ny distrika Ambohimahasoa ary tsy te hahalala zon’olombelona intsony.
Fitafiana tsy ara-dalàna Mandeha ny tsenan’ny akanjo mitovy amin’ny an’ny mpitandro filaminana
Mahazo vahana ny varotra ireo akanjo mitovy amin’ny miaramila tato ato ary voalazan’ny mpivarotra fa tsara ny tsena.